UN REPAS POUR MILLE Sahirana 800 nofahanana sakafo maimaimpoana
Antananarivo Sarety no itondrana marary
Tsy misy ny Fiarakaretsaka na Taxi. Tsy misy koa ny Taxibe. Etsy an-kilany koa anefa dia lafo ho an’ireo sarambabem-bahoaka ny hofan’irony fiara mpitondra
Nilatsaka avy eny ambony kamion’ny Samva Ramatoa maty notetezin’ny kodiarana
Saika handeha hiantsena teny Mahazo ny ramatoa iray monina eny Ambohiomangakely sy ny zanany vavy no sendra ny loza mahatsiravina omaly tokony ho tamin’ny 6 ora maraina.
Fitsinjarana ny Vatsy Tsinjo Mpilatsaka an-tsitrapo 500 hikarama 10 000 isan’andro
Mpilatsaka an-tsitrapo miisa 500 eo no manomana ireo « Vatsy Tsinjo » fanampiana omen’ny fitondram-panjakana ho an’ireo fianakaviana marefo sy sahirana mandritra izao fihibohana izao.
JIRAMA Maharay fitarainana 850 isa isan’andro
Efa miasa tanteraka ilay laharana maitso 3547 hifandraisan’ny orinasa JIRAMA amin’ny mpanjifa. Ao amin’ny ivon-toerana antsoina hoe : “Centre de relation client” no raisina ny antso rehetra avy any amin’ny mpanjifa.
Olona sahirana miisa 800 no nofahanan’ireo mpilatsaka an-tsitrapo sakafo maimaim-poana tetsy amin’ny EPP Analakely ny faran’ny herinandro teo ho fizarana fifaliana amin’izy ireo noho ny fahatongavan’ny fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona.
Anisan’ny nahazo tombontsoa tamin’izany ireo niangaran’ny vintana monina eny La Réunion kely…. Nambaran-dRtoa Hilda Hasinjo, anisan’ireo angady nananana ny hetsika fa izao no nataon’izy ireo dia entina hanomezana hafaliana ireo sahirana eny fa na dia indray andro monja aza ka mba hahatsiarovany fa miaina toy ny olon-drehetra mitovy aminy izy. Mbola hitohy hatrany ny hetsika, hoy hatrany izy. Mikasika ny politika hoenti-miady amin’ny fahantrana dia nomarihiny manokana fa an’ny fanjakana izany raha anjarany ny mijery izay mba kely vitany tahaka izao. Tafiditra ao anatin’ilay « Un repas pour mille » andiany fahatelo ny hetsika.